दूधमा बदाम मिसाएर खाँदा मिल्छ यी स्वास्थ्य लाभ !! | सुदुरपश्चिम खबर
दूधमा बदाम मिसाएर खाँदा मिल्छ यी स्वास्थ्य लाभ !!
३.बदामभित्र प्रशस्त मात्रामा पोटासियम पाइन्छ, त्यसैले जो मानिसमा कलेजोको समस्या छ उनीहरुले धेरै बदाम र दूध खानु हुँदैन । किनभने पोटेशियमको मात्रामा हुने वृद्धिले पनि कलेजोमा थप समस्या पैदा गर्न सक्छ । अनलाइनखबर बाट सभार